my post in irrawaddy blog and funny comments, ha ha ha
အရပ်သားတွေ သောင်းနဲ့ချီ အိုးပစ်အိမ်ပစ် ထွက်ပြေးရလောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပစ်အခတ်တွေဟာ KNU လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့က သတင်းစာကနေ အတည်ပေါက် ပြောလိုက်ပါတယ်။
၈၈ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းနဲ့ အစပြုတဲ့ နာမည်ကြီး ပါတီတခု တနေရာမှ မနိုင်အောင် လုပ်လိုက်တာလည်း KNU လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း မနက်ဖြန် ကြားရမယ် ထင်တယ်။
ဂျပန် စာနယ်ဇင်းသမား မြ၀တီသွားအောင် အခါတော်ပေးတာလည်း ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ KNU ပဲ ဖြစ်ရမယ်။ မြ၀တီမြို့ဆိုတာ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတယ်လေ။
ကျနော် မနေ့က ၁၅ မိနစ်ကြာအောင် ခေါင်းကိုက်တာလည်း KNU လက်ချက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဘေးမှာ ၄ နှစ်လောက် နေခဲ့ဖူးတယ် ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
ဟိုနေ့က ဒါရိုက်တာ တင်သန်းဦး ကွယ်လွန်သွားပြီလို့ ဆိုတယ်။ အဲဒါလည်း KNU လက်ချက် ဖြစ်ဖို့ များတယ်။ ဒီငနဲ မသေခင်က သုမွဲထသစ္စာ၊ သုမွဲထဂရုဏာတို့ ဘာတို့ ဆိုပြီး ရိုက်သွားတော့ KNU က သမ လိုက်တာ ဖြစ်မယ်။ အဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖားအံမှာ သွားရိုက်တုန်းက KNU ကွန်မန်ဒိုတွေ သူ့ကို ခြုံခို တိုက်တာ ထိသွားတယ် လို့ ချင်းမိုင် ရုက္ခစိုးကြီးက ပြောတယ်။ အဲဒီတုန်းက ထိသွားတဲ့ အဆိပ်အပ်က အခုမှ အစွမ်းပြတာ ဖြစ်မယ်။
(ဘီရုမာရဲ့ ကာတွန်းကို ဖျက်လိုက်မိတယ်။
27 comments: ထဲက ရယ်စရာ ကော်မန့် တွေကို ကူးလာခဲ့ပါတယ်။
သန်းရွှေသမီး ဗိုက်ကြီးတာလဲ KNU လက်ချက်ပဲ..။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲခိုးရတာလည်း KNU လက်ချက်ပဲ။ နေပြည်တော်ဆောက်ရတာလည်း KNU လက်ချက်ပဲ။ သန်းရွှေမိန်းမ မော်ဒယ်ဘွိုင်းတွေကို ခိုးစားနေရတာလည်း KNU လက်ချက်ပဲ။
အောင်သိန်းလင်း အိမ်ကို ချီးထုပ်နဲ့ ပေါက်တာလဲ KNU ဗျ။
Irrawaddy ကို hack တာလည်း KNU ပဲဖြစ်မှာ... ဟီးဟီး
ဟေ့ အရူး..... အဲဒီ ကုန်ဈေးနှုန်းတို့.... စီးပွားရေးတို့ဆိုတာရော.... မင်းအဖေတွေထိန်းချုပ်ထားတာ မဟုတ်လား??? အဲဒီတော့မင်းအဖေကို လက်ညိုးမထိုးလို့ KNU ကိုလက်ညိုးထိုးရမှာလား?? မင်းခေါင်းထဲမှာ ဦးနှောက်ရှိရင် စဉ်းစားပေါ့...
ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တာလည်း KNU လက်ချက်ပဲ၊ င်္FEC ဈေးကွက်မ၀င်တာလဲ KNU လက်ချက်ပဲ...ခစ်..ခစ်...ကျေနပ်ပလား။ နောက်ဘာတွေ ၀န်ခံပေးရဦးမလဲ...ခစ်..ခစ်..။ သြော်...ပိုက်ဆံအစုတ်တွေကို ပလတ်စတစ်အိပ်နဲ့ထည့်သုံးရတာလဲ KNU လက်ချက်ပဲ...ခစ်..ခစ်
လောလောဆယ် ရခိုင်ူပည်နယ်မှာတိုက်သွားတဲ့ ဂီရိ မုန်တိုင်းကလဲ KNU လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ :):):)
KNU ; KNLA တော်မှန်း ခုမှ သိရသဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
တိုင်းပြည်သယံဇာတ တွေ ရောင်းစားပီး အိပ်ကပ်ထဲ ထည့် နေတာလဲ ကေအင်န်ယူ လားဘဲ။
တေဇ စသော ခေတ်ပျက်သူဌေး ကြီးတွေ ပေါ်လာတာလဲ ကေအင်န်ယူ လုပ်တာဘဲလား။
အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေ ဂုတ်ပေါ်ခွစီးထားတဲ့ ဦးပိုင်၊ MEC တွေ ကလဲ ကေအန်ယူ တွေလားဗျာ။
ကျွန်တော် အီအီး ပါတာ သန်ကောင်တစ်ကောင် ကျတယ်..အဲ့တာ KNU ကြောင့်ပဲလား ....ဟားဟားဟား....
မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ ကေအင်ယူ၊ ပြည်သူတွေဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ မီးပျက်တာလဲ ကေအင်ယူ၊ အောင်သိန်းလင်းချမ်းသာနေတာလဲ ကေအင်ယူ၊ သန်းရွှေသမီးတွေ သောင်းကျန်းနေတာလည်း ကေအင်ယူပဲ။ ကြိုင်ကြိုင်ကြီး အငယ်လေးတွေနဲ့ ခေါ်တွဲနေတာလည်း ကေအင်ယူပဲ။ ဗမာပြည်အခုလိုဖြစ် နေတာလဲ ကေအင်ယူပဲ၊ စားစရာမရှိအောင်လုပ်တာလဲကေအင်ယူ၊ နာဂစ်နဲ့ ဂီရိလဲ ကေအင်ယူပဲ။ ကြံဖွတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်တာလဲ ကေအင်ယူပဲ။ အပြစ်မရှိတဲ့လူတွေ ထောင်ထဲရောက်တာလဲ ကေအင်ယူ၊ မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ ကေအင်ယူရယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်သန်းရွှေကလည်း အရှက်မှမရှိပဲကိုး.....
မြန်မာပြည်က လူတွေ ABCD တောင် မသိကြတော့ဘူးနော် ..DKBA ကို KNU လို့ မှားအသံလွင့်တဲ့အထိ စာမတတ်အောင် ရိုက်ချိုးထားတာလဲ.........KNU လုပ်ထားတာပဲဖြစ်မယ်
ငါ့သမီး ဂျီကျနေတာ --ဟင်းးဟင်းဟင်း KNU
မဲနိုင်တာလဲ KNU ပဲ ဟီးဟီး
Please stop non-sense. Wars, armed conflict might be entertaining for watchers. But in real life, they are not movie. People are running for life. Please have some human heart.
Good comments! might be KNUss
အော် . . မနေ့က အိမ်မက်မကောင်းတာ အခုမှဘဲ အဖြေတွေ့တော့တယ် .. KNU ကြောင့်ကိုး . . တော်တော်ဆိုးတဲ့ KNU အိမ်မက်ထဲအထိ . .
အောင်မယ်ငေး.. KNU စာမမိအောင် ဘယ်လို နေရပါ့..ကြောက်စ..ကြောက်စ..